Taariikhda iyo horumarka Dalxiiska Soomaaliya (warbixin) – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
By kullane / August 17, 2020 August 17, 2020
Dalxiisku waa adeeg lagama maarmaan ah oo dhaliya in dakhli farabadan laga soo xareeyo goobaha taariikhiga ah ee ka haray ilbaxnimadii hore iyo daawashada kheyraadka dabiiciga ah ee Alle ku maneystay caalamkaan quruxda badan ee loo hibeeyay in ay ku noolaadaan qeybaha bulshada ee ku kala firirsan koonkaan.
Haddaba, Dalka Soomaaliya waxa uu ka mid yahay dalalka hodanka ku ah adeegyada dabiiciga ee suurtagaliya Dalxiiska sida goobaha taariikhiga ah, Xeebaha, Biyo dhacyada ,Buuraha kala sareeya,Wabiyada iyo deegaanada kale ee Biyo qabatinka leh,dhammaantoodna waxa ay soo jiitaan Dadka Dalxiisayaasha ah ee doonaya in ay ku safraan gudaha Dalka Soomaaliya.
Quruxda dabiiciga ah iyo cimilada wabaagsan ee Alle ku maneystay Dalka,waxa ay sababtay in la dardargaliyo Sameynta maamul nidaamiya Dalxiiska Dalka,sidaa daraadeed, sanadkii 1960-kii Dalxiisku waxa uu ka mid noqday adeegyadii lagala wareegay Dowladdii Daakhiliga ee ku tiirsaneyd maamulkii Talyaaniga ee xoriyad gaarsiinta Soomaaliya sanadkii 1956-60-kii.
Si kor loogu qaado adeegyada suurtagaliya Dalxiiska sanadkii 1969-kii waxaa dowladdii Mileteriga ay meel marisay sharci qeexaya Ilaalinta Duurjoogta,dhowrista deegaanka iyo diyaarinta aagag la xakameeyay oo loogu talagalay in ugaarta ay ka helaan cows iyo keydad biyo.
Dalxiisku waa qeyb ka mid ah ilaha laga helo dhaqaalaha ee lama huraanka u ah jiritaanka Dowladnimo iyo horumarka dalka,waxaana arintaasi daliil u ah tiro badan oo dalxiisayaal Ajanabi ah iyo Dad Soomaali ah ayaa sanad kasta booqda goobaha taariikhiga ah iyo meelaha kale ee ku haboon Dalxiiska sida:- xeebaha Berbera, Saylac, Bullo-xaar, Maydh & Xiis, Laas-qoray, Jasiira .Liido, iyo Daallo oo ah Buurta Soomaaliya ugu dheer.
Marka laga yimaado Hoteelada ,goobaha kale ee loo Dalxiis tago iyo Taallooyinka qiimaha leh ee ku wanaagsan Daawashada,waxaa jira dhismayaal qadiim ah oo soo jiidan kara Dalxiiska,Waxaana ka mid ah Dhismihii Sayid Barqash ,Masaajidka C/Casiis,Masaajidka Arbaca-rukun, Qalcadaha Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ee Eyl iyo Taleex ,Masaajidka Qiblateenka ee ku yaala Saylac iyo kuwo kale.
Inkastoo wixii ka dambeeyay 1990-kii, ay gudaha dalka ka dhaceen dagaal sokeeye oo hakiyay dhamaan ilihii dalxiiska,haddana, Ganacsato iyo Qurba-joog Soomaaliyeed oo ku soo noqday dalka ayaa sanadihii dambe ku dhaqaaqay dhismaha Hoteello badan, guryo iyo Barxado loogu talagalay nasashada,waxayna qeyb libaax ka qaateen horumarka Dalxiiska iyo koboca dhaqaale ee dalka.